Samsung dia hanavao ny telefaona finday amin'ny Android Oreo amin'ny taona 2019 | Androidsis
Ny telefaona Samsung sasany dia tsy maintsy miandry ny 2019 vao mahazo Android Oreo
Eder Ferreno | | Samsung, Android Version
Samsung dia tsy ilay orinasa mifanaraka tsara amin'ny kalandrie fanavaozana ny Android Oreo. Ampahany miavaka amin'ny findain'ny orinasa Koreana no mbola tsy nahazo ity fanavaozana ity. Ary ho an'ireo mpampiasa sasany izay miandry azy dia manana vaovao ratsy izahay. Satria misy ny maodely izay tsy maintsy miandry hatramin'ny 2019 vao hahazo ity fanavaozana ity.
Ny orinasa Tsy nisongadina indrindra fa noho izy iray fanavaozana tsara indrindra ny Android Oreo. Miadana izy ireo, ary mbola misy modely maro havaozina. Ny orinasa dia mamela antsika amin'ny fandaharam-potoana fanavaozana ny maodely ambany sy antonony.
Rehefa miatrika ireo tandavan-tany ireo, toa mazava fa tsy manome laharam-pahamehana azy ireo i Samsung. Satria amin'ny tranga sasany, ny fanavaozana dia tsy hahatratra ny telefaona raha tsy amin'ny Janoary 2019. Ary raha tsy misy fahatarana ao aminy, araka ny efa hitantsika tamin'ny maodelin'ny marika Koreana hafa. Ity ny kalandrie izay atolotry ny orinasa:
Galaxy Tab A 2017: Janoary 2019
Galaxy A9 Pro 2016: Janoary 2019
Galaxy C7 Pro: Janoary 2019
Galaxy C9 Pro: Janoary 2019
Galaxy J2 2018: Janoary 2019
Galaxy On5 2016: Janoary 2019
Galaxy On7 2016: Janoary 2019
Galaxy J7 2017: Janoary 2019
Galaxy J7 2018: Janoary 2019
Maro amin'ireo maodely ireo no tsy misy amin'ny tsena andrefana. Na dia misy telefaona toy ireo ao amin'ny faritr'i J7 izay voaray tsara tamin'ny tsena maro, toa an'i Espana. Noho izany, manaitra ny saina fa ny Samsung dia mampiandry ny mpampiasa ela be vao mahazo ity fanavaozana ity. Ary ity raha toa ka mandeha tsara ny zava-drehetra.
Satria ny zava-misy dia misy ny mety hampihemotra ireo fanavaozana. Ka tsy maintsy mailo isika ary Jereo raha mahafeno ny fandaharana fanavaozana Android Oreo i Samsung. Tsy fakan-tahaka ny orinasa koreana, ary hiteraka hatezerana mihoatra ny iray amin'ireo mpampiasa azy io kalandrie io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Ny telefaona Samsung sasany dia tsy maintsy miandry ny 2019 vao mahazo Android Oreo
Sary sy data vaovao momba ny PocoPhone F1